Lego Nhandare dzekutamba AR ikozvino dzave kuwanikwa paApp Store | IPhone nhau
Munguva yemusangano wekupedzisira wevagadziri takaona kuti vakomana vanobva kuCupertino vanoenderera sei kubheja pane chakawedzera chokwadi uye vakaita mharidzo dzinoverengeka. Imwe yeakanyanya kurova yaive yeiyo LEGO Playgound, mutambo unotibvumidza isu kuisa vatambi munzvimbo chaiyo pamusoro pekutibvumidza kubatana nezvisikwa
Iko kunyorera kunotipa dzakasiyana nhandare kuti tiongorore, yekutanga iri LEGO Ninjago. Uchishandisa akasarudzwa maseti emuviri kubva kuNinjago Dragon Hunters, vatambi inogona kusangana nemaseti aya kuti aone akakosha mhedzisiro, mifananidzo uye mavara anouya kuhupenyu nekuda kwechokwadi chakawedzerwa. Mukati meLEGO Ninjago isu tinayo dhiziri seti uye gomba redhiragoni.
Mukutsanangurwa kwemutambo, tinogona kuverenga:
Vana vemazuva ano vari kugona hunyanzvi hwekutsvaga nguva nyowani uye mafomu ekutamba, uye LEGO Nhandare dzinovapa mukana 'wekurarama' wekuyedza uye kudzidza zvakananga navo. Iyo chaiyo inzira yakasarudzika yekudyidzana navo nenzira inonakidza uye yekuyedza uye kuvaunza padhuze needu maitiro ekuvandudza.
Kugovana zvazvino zviitiko zvekutamba kunonakidza kwazvo kuvana uye kunobatsira zvakanyanya kune edu LEGO dhizaini uye matambi ekuvandudza, anogona kutora mhinduro yako oishandisa kuita zviitiko zvekutanga zvirinani uye zvakanyanya kubatikana.
Uyu mutambo / app Inoenderana kubva ku iPhone 6s zvichienda mberi uye iPad Pro kubva 9,7 zvichienda mberi, kuwedzera kune yechishanu chizvarwa iPad. Nehurombo, iyo iPad Air 5 haina kutariswa pakati pemidziyo inoenderana, kunyangwe iine simba rakaringana kutitendera kuti tifarire zvishoma neicho chakawedzera icho LEGO inotipa kuburikidza nepuratifomu yeARKit.
LEGO AR Nzvimbo dzekutamba dzinowanikwa kurodha mahara, iri muchiSpanish uye inoda iOS 12 kana kuti gare gare.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Lego Nhandare dzekutamba AR ikozvino yavapo paApp Store
Ini ndichafanirwa kumira kunyora nezve Android.
Iyo HomePod inosvika kuChina kutanga kwegore rinouya